Romafo 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde Kɔmaa Romafo 12:1-21
Momfa mo nipadua mmɔ afɔre a ɛte ase (1, 2)
Akyɛde no dɔɔso, nanso nipadua no yɛ baako (3-8)
Sɛnea ɛsɛ sɛ Kristofo bɔ wɔn bra (9-21)
12 Enti anuanom, menam Onyankopɔn mmɔborɔhunu so srɛ mo sɛ momfa mo nipadua+ mmɔ afɔre a ɛte ase, a ɛyɛ kronkron,+ na ɛsɔ Onyankopɔn ani. Na bere a mode ɔsom kronn rema no no, momfa mo adwene nyɛ adwuma nsusuw nneɛma ho.+ 2 Na munnyae sɛ moma wiase yi* kyerɛ mo kwan; mmom monsesa mo adwene mfa nyɛ mo ho foforo,+ sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu+ nea Onyankopɔn pɛ, a eye, na ɛsɔ ani, na edi mu no. 3 Menam adom a wɔde adom me no so ka kyerɛ mo mu biara sɛ, ɛnsɛ sɛ obu ne ho tra nea ɛsɛ.+ Mmom onnwen na onnya adwene a emu da hɔ, sɛnea gyidi a Onyankopɔn asusuw ama no no te.+ 4 Efisɛ nipadua wɔ akwaa bebree,+ nanso akwaa no nyinaa nyɛ adwuma baako. 5 Saa ara na yɛn nso, ɛwom sɛ yɛdɔɔso de, nanso yɛyɛ nipadua baako wɔ Kristo mu, na yɛn mu biara yɛ ne yɔnko akwaa.+ 6 Esiane adom a wɔde adom yɛn no nti, obiara ne akyɛde a ɔwɔ.+ Ɛno nti, sɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ a, momma yɛnhyɛ nkɔm sɛnea yɛn gyidi te; 7 sɛ ɛyɛ ɔsom a, momma yɛnkɔ so nsom; nea ɔkyerɛkyerɛ no, ɔnkɔ so nkyerɛkyerɛ;+ 8 nea ɔhyɛ nkurɔfo nkuran* no, ɔnkɔ so nhyɛ nkuran;*+ nea ɔkyɛ ade no, onyi ne yam nyɛ;+ nea odi biribi anim no, ɔnyere ne ho nyɛ;+ nea ohu mmɔbɔ no, ɔmfa anigye nyɛ.+ 9 Mommma nyaatwom mmma mo dɔ mu.+ Munkyi bɔne;+ mommata papa ho. 10 Munnya onuadɔ mma mo ho, na obiara mpɛ ne yɔnko asɛm paa. Obiara nni kan* mfa nidi mma ne yɔnko.+ 11 Monyere mo ho* nyɛ adwuma, na monnyɛ anihaw.*+ Monyɛ hyew honhom mu.+ Monyɛ adwuma mma Yehowa* sɛ nkoa.+ 12 Munni ahurusi wɔ anidaso no mu. Mummia mo ani nnyina amanehunu mu.+ Mommɔ mpae daa.+ 13 Momma akronkronfo nea wohia.+ Momma mo ani nnye ahɔhoyɛ ho.+ 14 Monkɔ so nhyira wɔn a wɔtan mo ani no;+ munhyira, na ɛnsɛ sɛ modome.+ 15 Mo ne wɔn a wodi ahurusi nni ahurusi; mo ne wɔn a wosu nsu. 16 Adwene a mowɔ wɔ mo ho no, munnya saa adwene no ara bi wɔ afoforo ho; munnnwinnwen nneɛma akɛse ho, na mmom munni nneɛma a ɛba fam akyi.+ Monnyɛ mo ani so anyansafo.+ 17 Mommfa bɔne nntua obiara bɔne so ka.+ Nneɛma a nnipa nyinaa hu sɛ eye no, momma ɛho nhia mo. 18 Sɛ ɛbɛyɛ yiye a, mo fam de, monyɛ nea mubetumi biara ne nnipa nyinaa ntena asomdwoe mu.+ 19 Adɔfo, munntua bɔne so ka, na mmom munnyaw mma abufuw no;*+ efisɛ wɔakyerɛw sɛ: “ ‘Me na mitua bɔne so ka; me ara metua ka,’ Yehowa* na waka.”+ 20 Mmom “sɛ ɔkɔm de wo tamfo a, ma no biribi nni; sɛ osukɔm de no a, ma no biribi nnom. Woyɛ saa a, wobɛboaboa nnyansramma ano agu n’apampam.”*+ 21 Mma bɔne nnni wo so nkonim, na mmom kɔ so fa papa di bɔne so nkonim.+
^ Anaa “otu fo.”
^ Anaa “ntu fo.”
^ Anaa “Obiara nni kan ntu anammɔn.”
^ Anaa “Momfa nsi; Momfa ahokeka.”
^ Anaa “monnyɛ mo adwuma anihaw so.”
^ Kyerɛ sɛ, Onyankopɔn abufuw.
^ Kyerɛ sɛ, wobɛma onipa no abufuw no anan akɔ, na ne koma aba fam.